warning: Creating default object from empty value in /home/ramanana/gtt/modules/node_gallery/node_gallery.inc on line 161.
18/01/2012 : Magro an-tsary ...
Araho eto ireo sary na namarika ny teny amin'ny Kianjan'ny Finoana
Magro Behoririka androany.
18/01/2012 : Kianjan'ny Finoana : hafaliana sy fihetseham-po ... (+vidéo)
Feno fihetseham-po ny vahoakan'ny Kianjan'ny Finoana androany raha nandray ny hafatry ny Filoha RAVALOMANANA. Hobim-pifaliana, ranomasom-piravoana nefa toe-tsaina vonona hanamafy ny tolona ihany koa no tazana teny amin'ny endriky ny mpiara-mitolona rehetra. Ny ora nanaraka ny fanambarana nataon'ny Filoha RAVALOMANANA dia naompana tanteraka tamin'ny fitondrana am-bavaka ny Firenena sy ny Malagasy ary indrindra ny Filoham-pirenena sy ny fianakaviany izay hitodi-doha an-tanindrazana rehefa voatery nanao sesitany ny tenany tao anatin'ny telo taona latsaka noho ny setrasetran'ny mpanongam-panjakana.
Teo noho eo dia namafisina ny fandaminana mikasika izay rehetra afaka mifanampy amin'ny fandraisana ireo namana avy any amin'ny Faritra. Tsapa fa tena mankato ny Filohany ny Malagasy satria dia nilaharana ny fisoratana anarana hifanolo-tanana amin'izany fandraisana ny mpiara-mitolona izany. Raha ny fandaminana ihany koa dia hahena ny kabary politika fa ny fotoam-bavaka no hibahana ny fihaonana eo amin'ny Magro mandrapaha-tongan'ny sabotsy 21 janoary 2012 andro hahatongavan'ny Filoha RAVALOMANANA sy ny fianakaviany eto Madagasikara indray.
14/01/2012 : Hoavy … tsy hitondra korontana (+vidéo)
Namafisin’i Zafilahy Stanislas androany teo amin’ny Kianjan’ny Finoana fa « tsy hanakorontana akory no ahatongavan’ny Filoha RAVALOMANANA ». Tsy handroba sy hanimba velively ihany koa ny mpanohana azy satria zanakin’ny ara-dalàna. Efa fanambin’ny Filoha RAVALOMANANA ny hampandrosoana indray ny tanindrazana iombonana mba hanarenana ny fijaliana naterakin’ny fanonganam-panjakana tamin’ny 2009. Efa niteny rahateo izy fa atokany ho an’I Madagasikara ny andro sisa iainany. Tao anatin’ny telo taona izao dia namosavian’ny mpanongam-panjakana tamin’ny vonjy tavanandro ny vahoaka Malagasy ary dia niverina nilahatra vary sy menaka indray.
Tamin’ny andro nitondran’ny Filoha RAVALOMANANA anefa dia ny fidirana amin’ny seha-pihariana isan-karazany no nosokafany mba hampiakatra ny fahefa-mividy ka tsy hampisy elanelana be eo amin’ny saranga sosialy Malagasy.
Fiverenan’ny lalam-barotra ivelany …
Ny ankamaroan’ny lalam-berotra ivelany misy ifandraisany amin’ny fanjakana dia nikatona avokoa taorian’ny 2009. Tsy mankasitraka ny fiaraha-miasa amin’ny mpanongam-panjakana ny ankamaroan’ny firenen-dehibe satria manitsakitsaka ny demokrasia izany. Raha ny momba ny AGOA manokana dia efa nanambaran’ny Amerikana fa ny Filoha RAVALOMANANA no ankatovin’izy ireo satria izy no lanim-bahoaka nitondra farany teto Madagasikara. Midika izany fa ny fiverenan’ny Filoha eto amintsika dia mety hanamora ny fisokafan’ity lalam-barotra amerikana ity. Isan’ny niteraka famoronana asa amanetsiny manerana ny Nosy izy io satria sehatr’asa maro no voakasika tamin’izany AGOA izany. Fanantenan’ny Malagasy tsy vaky volo noho izany ny mba hisokafany indray sy ny hiverenan’ny asa vokasik’io fifanarahana ara-barotra io izay namelomana mpiray tanindrazana maro tamin’ny fotoan’androny.
13/01/2012 : Ny TSAR hatrany no valisoa an’ny vahoaka (+vidéo)
Nandritra ny tolona telo taona natrehin’ny vahoaka Malagasy dia ny filaminana no fenitra nifampitondrana . Tsy sanatria akory fahalemena fa lesona efa hita tamin’ny nataon’ny mpanongam-panjakana tamin’ny 2009 fa tsy ahitam-bokantsoa ny fikitranana. Mijoro amin’ny tanjony hatrany anefa ny vahoaka dia ny famerenana ny Firenena ao anatin’ny valan’ny ara-dalàna ahafahana miatrika ny fanarenana sy ny fampandrosoana. Tsy manaiky lembenana amin’ny tsy fitazomana ny fahamarinana ny mpomba ny Filoha RAVALOMANANA ary tsy miala eo amin’ny Kianjan’ny Finoana raha tsy tonga ilay Filoham-pirenena nanao sesitany noho ny herisetran’i TGV sy ny namany.
Tsy teny maharary …
Ny resaka fiverenan’I Dada, ny fivoahan’ny gadra dia tsy teny maharary natao handratra ny hafa tsy akory. Efa noraketina ao anaty tondro zotra izany ary ny fanajana izany no ahazahoana fitoniana sy fankatoavana iraisam-pirenena. Tsy sanatria mampietry ny fanajana ny sonia efa natao fa manandratra izay nanao azy. Ny amboletra ataon’ny mpanongam-panjakana kosa anefa dia hitarika ny faharavan’ny fiaraha-mitantana ka hanilika an’I TGV tsy ho filohan’izany tetezamita izany intsony. Tsara ny mampahatsiahy fa aorian’ny fiverenan’ny Filoha RAVALOMANANA, ny fivoahan’ny gadra politika sy ny fanokafana ny haino aman-jery dia io fialan’I TGV io no tena lafatra ho an’ny tia tanindrazana rehetra.
12/01/2012 : Fitoniana : ny ara-dalàna no fenitra (+vidéo)
Araka ny tatitra nentina manoloana ny mpiara-mitolona rehetra dia niroso amin’ny dingana ambonimbony kokoa androany ny fivorian’ny komity manokana mandinika ny fametrahana ny fitoniana ao amin’ny governemanta. Araka ny fangatahan’izy ireo dia efa nomena azy ny anaran’ireo gadra politika rehetra miaraka amin’ny vesatra itazomana azy. Nampiarahana tamin’izany koa ny momba ireo nahazo fahafahana vonjy maika izay mbola migadra ihany na dia efa ety ivelany aza. Raha ny fanazavan’ny depioten’I Brickaville ihany dia tsy azo ikoropahana ny fanafahana ireo mpiara-mitolona ireo mba tsy haka tahaka ny nataon’ny mpanongam-panjakana tamin’ny 2009 isika.
Tsy maintsy manaraka ny pitsopitsony araka ny lalàna rehetra noho izany mba tsy ahafahan’ny sasany mamerina ireo namana ireo any am-ponja any aoriana. Fantatra mantsy ny ankamaroan’ireo mpanao politika nigadra navoakan’I TGV sy ny ekipany tamin’ny 2009 dia azo averina any am-ponja avokoa satria tsy manana taratasy mazava momba ny fanafahana azy. Nambarany moa fa “efa foto-kevitra nitondrana ny tolona rahateo ny ara-dalàna koa mijoro ho modelin’izany hatrany ny zanak’I Dada”.
Tomorina akaiky …
Mikasika ny toe-draharaha ankapobeny eto amin’ny Firenena kosa dia namafisin’I Leriva Manahirana fa “tsy azo avela hanara-po ny ekipan’I TGV fa tsy maintsy tomorina akaiky ahafahana manara-maso azy”. Fitondra jiolahim-boto hoy izy no efa napetrak’izy ireo nandritra ny telo taona ary mbola te-hanohy izany ny foza saingy tsy hanaiky lembenana koa ny Ankolafy RAVALOMANANA. Tsy misy ankoatran’ny fandrodanana ny fitondran’I TGV ihany no ahafahana manarina ny Firenena raha ny fanzavan’ity CST ity ary ny fiverenan’ny Filoha RAVALOMANANA no hanafaingana izany. Arak’izany dia tokony imasoan’ny isam-batan’olona ny fanentanana ny mpiara-belona amin’ny andraikitra tsy maintsy ho raisina amin’ny fahatongavan’ny Filoha. Nampanantena I Leriva Manahirana fa tsy ho ela intsony izany fotoana izany saingy “ny Filoha RAVALOMANANA ihany no aoka hanambara azy”.
12/01/2011 : Tsy misy antenaina … (+vidéo)
Antso avo amin’ny fahatsiarovan-tenan’ny mpiray tanindrazana rehetra no nentin’I Ra-Guy teo amin’ny Magro androany. “Tsy misy azo antenaina ny amin’ny mpanongam-panjakana” hoy izy raha nandalina fohy ny lahateny nataon’I TGV nanoloana ny andrim-panjakana ny tenany. Notsoriny fa nosafoin’I TGV fotsiny avokoa ny tena olan’ny mpiara-belona fa ny hanampi-maso amin’ny fampananatenan poakaty no nahamaika azy. Nentaniny arak’izany ireo manana olana rehetra tsy hilefitra amin’ny fitakiany satria tsy misy saina mieritreritra izany raha ny ao Ambohitsorohitra. Nambarany anefa fa tsy misy tsara indrindra toy ny fanambarana ny hery koa raha azo atao dia tsara ny mifanatona.
Tsy azo tanterahina
Mikasika ny loharanon’angovo vaovao kasain’I TGV haorina eto Madagasikara dia notaterin ‘I Ra-Guy teo amin’ny Kianjan’ny Finoana ny fanazavana nentina manam-pahaizana manokana iray momba izany. Tamin’izany no nahafantarana fa mila velaran-tany midadasika ny fametrahana ny fotodrafitrasa azahoana izany herinaratra avy amin’ny rivotra izany. Ankoatra izay dia enina taona be izao farafahakeliny no fotoana ilaina ary aman-tapitrisany miliara ariary no vola ilaina vao afaka hananganana izany. Tsy vitan’izany fa raha ny kajikajy tsotsotra dia vao maika hampiakatra ny saran’ny jiro ny fampiasana azy izany hoe tsy mamaha ny olan’ny Malagasy velively.
11/01/2012 : Zafilahy Stanislas : « fitaka ny kabarin’i TGV » (+vidéo)
Tsy mahita hirika hampandriana adrisa intsony ny mpanongam-panjakana raha ny fanazavana nentin’I Zafilahy Stanislas androany. Nozarainy tamin’ny mpiara-mitolona rehetra fa tsy azo antenaina ny fampiakarana karama satria ny teti-bola 2012 aza nahena 15%. Ny vidin’enatana anefa dia hiakatra avy hatrany taorian’ny fanomezan-toky nataon’I TGV androany na dia efa mampikaikaika aza izany ankehitriny. “Kabary ambony vavahady no nataon’I TGV” hoy Zafilahy. Manginy fotsiny ny fandikana lalàna ataony amin’ny filazana ampahibemaso ny tetikasa lavitrezaka izay tsy andraikiny velively.
Ankoatra izay dia nampitandrina ny mpomba ny FATE ity filoha lefitry ny Kongresin’ny tetezamita ity satria nanantena izy, araka ny filazany, fa tena hisy tokoa ny fiaraha-mitantana saingy toa mbola manao amboletra ihany ny mpanongam-panjakana ankehitriny. Notsoriny anefa fa tsy azo idovirana intsony ny fiverenan’ny Filoha RAVALOMANANA eto Madagasikara na dia tena tsy mahafaly ny FATE velively aza izany. Hiverina hanafana ny eny an-kianja ary ny tenany raha ny filazany satria tsy misy azo antenaina ny finiavan’ny FATE koa “aleo ny fanomanana ny fitsenana ny Filoha RAVALOMANANA no hamafisina”.
10/01/2012 : Leriva Manahirana : “tsy mila pitsopitsony ny fodian’ny Filoha RAVALOMANANA” (+vidéo)
“Tsy mila procédure intsony ny fodian’I Dada” hoy ny depiote leriva Manahirana raha nitafa tamin’ny mpiara-mitolona teo amin’ny Kianjan’ny Finoana ny tenany. Nambarany fa fialana andraikitra ihany ny fifanilihana ataon’ny FATE amin’izao fotoana satria ny tondro zotra dia efa mandidy ny hanatanterahana sy ny hanamorana izany ho an’ny mpitondra ny tetezamita. Niseho an-gazety rahateo fa na Marius Fransmann aza dia mahazo fanakianana mafonja avy amin’ny fianakaviam-be iraisam-pirenena noho ny tsy fahatanterahan’ny andininy faha-20 amin’ny tondro zotra. “Tsy mahita hirika intsony ny mpanjanaka” hoy Leriva Manahirana “ka izay no mahatonga azy mampiditra ny zarazarao hipatitaka eto an-kianja”.
Nazavainy fa teti-dratsin’ny Frantsay no mahatonga ny korontana madinidinika eo amin’ny samy mpandala ny ara-dalàna. Tsy tokony handairan’izany anefa ny zanak’I Dada raha ny hafatra napetrany satria ny fandraisan’ny tsirairay ny andraikitra manandrify azy no ahafahana mandray am-pahamendrehana ny Filoham-pirenena.
Fivoriana tsy ara-potoana : nikatso sahady ny tetsy Anosy
Saika nanao amboletra indray ny mpomba an’I TGV androany nandritra ny fiatrehana ny fivoriana tsy ara-potoana voalohany tao amin’ny CST Anosy. Araka ny tatitra nentin’I Leriva Manahirana dia saika nanao amboletra nandinika momba ny fandrafetana ny CENI avy hatrany izy ireo. Nitsivalana anefa ny avy amin’ny ankolafy RAVALOMANANA, araka ny filazany, satria tsy manaraka ny paika fitondrana ny volavolan-dalàna ho dinihina izany. Vokany dia nihemotra amin’ny Alakamisy ho avy izao ny fivoriana handinihana momba izany ho an’ny etsy Anosy.
Tsara ny mampahatsiahy fa efa teny nifanomezan’ireo mpitarika sy ny mpitolona fa tsy handray anjara amin’ny fananganana izany CENI izany ireo nandray seza raha tsy misy ny dingana hita maso amin’ny fametrahana ny fitoniana eto Madagasikara.
09/01/2011 : Parlemanta : manomboka androany ny ady … miandry ny vahoaka
Raha ny filazan’ireo olon’ny Ankolafy RAVALOMANANA niditra any anatin’ny parlemanta dia fanombohan’ny ady araka ny lalàna na « bataille juridique » any anatin’ny andrim-panjakana misy azy ireo. Nambaran’i Ignace Ramamizafiny mantsy fa tsy nanaraka ny tondro zotra ny fampiantsoana fivoriana tsy ara-potoana atrehin’izy ireo manomboka androany. Ny lalàna nametrahana ny tondro zotra ho lalàm-panjakana sy ny lalàm-panorenan’ny FATE no nentina niantso izao fivoriana tsy ara-potoana izao raha tokony efa ny tondro zotra no anaovana izany.
Raha ny tokony ho izy araka ny fanazavana ihany dia io tondro zotra io no solon’ny lalam-panorenana itondrana ny Firenena amin’izao fotoana. Mbola sahin’i TGV anefa no nanao sonia ny fampiantsoana fivoriana tsy ara-potoana amin’ny anaran’ny filohan’ny FATE na dia ny tondro zotra aza no nametraka azy ho filohan’ny tetezamita.
Nanao antso avo amin’ny Filoha RAVALOMANANA Marc ity solotenan’i Moramanga ity mba hanapaka ny daty hodiany ary hampita izany amin’ny vahoaka mpandala ny ara-dalàna rehetra. Raha i TGV sy ny ekipany mantsy dia tsy hanatanteraka ny andininy faha-20 ao amin’ny tondro zotra velively. Tsy manana finiavana politika mihitsy raha ny fihetsik’ireo mpanongam-panjakana no jerena. Ny Ankolafy RAVALOMANANA mantsy dia efa nampiseho finiavana hamaha ny krizy hatrin’ny ela. Efa nosoniaviny avokoa izay mety fifanarahana politika neritreretina nivoahana tamin’ny krizy rehetra saingy ny FATE hatrany no mibahana amin’ny fanatanterahana azy ireny.